I-Google Chrome iza ku-Android | Kusuka kuLinux
I-Google Chrome iza ku-Android
Ngemuva kweminyaka eminingana ngingekho ezweni elihambahambayo, -Google ukhiphe inguqulo yabazana naye isiphequluli ukuze Smartphones y amaphilisi, yize nge ukulinganiselwa.
I-Chrome ingalandwa kuphela ku- I-Android 4.0. I-Ice Cream Sandwich. Futhi, ayisekeli Flash.
Kutholakala ku-Beta kuphela ku-Android 4.0, le nguqulo ye-Chrome ihlala ezinsikeni ezimbili ezifanayo nedeskithophu:
Isivinini: Bathembisa ukuthi iyashesha njengesixazululo sedeskithophu ngokufaka bobabili ubuchwepheshe obufanayo (ngokwesibonelo, ukulayishwa kuqala ngemuva kwezingosi zokuqala ezitholwe kusesho oluthile).
Ukwenza izinto zibe lula: yakhelwe kusukela ekuqaleni icabanga ngokukuvumelanisa nokuyiguqula ngangokunokwenzeka kokuhlukile kwezindawo ezihamba phambili. Phakathi kokuthuthuka, basebenzise uhlelo olusha lwamathebhu oluvumela ukuthi wonke amathebhu adingekayo avulwe ngaphandle kokulahlekelwa ukusebenza, engeza ukusekelwa kokuthinta komzimba kanye nesici okungahlolwa kuqala izixhumanisi.
Kukhona nokuthile okuthakazelisa ngempela futhi akuyona enye into ngaphandle kokuvumelanisa phakathi kweChromes.
Ngaphandle kokuvumelanisa amabhukumaka we-Chrome kukhompyutha nalawo esoftware ephathekayo, umsebenzisi uzokwazi ukufinyelela kumathebhu afanayo kwidivayisi yakhe yeselula abayibone kwi-PC noma kwi-Mac yabo lapho bephuma. Imininingwane egciniwe evela emsebenzini wokuqedela ngokuzenzakalela nayo ithunyelwa kunguqulo ye-smartphone nethebhulethi. Ngaphezu kwalokho, amakhasi angathunyelwa kwisoftware yokugcina ukuze ifundwe ngokuhamba kwesikhathi.
Njengakwinguqulo yamakhompyutha, i-Chrome ye-Android ikuvumela ukuthi udlulise amehlo ku-incognito.
Landa i-Google Chrome ye-Android
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-Google Chrome iza ku-Android
Kubi kakhulu akuyona eye-2.x. yize unehlengethwa awudingi i-chrome.
Nika inkululeko yakho uvune "umkhiqizo ongcono"?